भिङगिठे : २१ वर्षपछी श्रीमान घरमा आउँदा श्रीमती ठुस्स ! – ebaglung.com
भिङगिठे : २१ वर्षपछी श्रीमान घरमा आउँदा श्रीमती ठुस्स !
२०७५ मंसिर १२, बुधबार २१:४७	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
दिनेश शर्मा, भिङगिठे २०७५ मंसिर १२ । साबिक भिङगिठे गाबिस वडा न ४ थाम्का निबासी गमान बहादुर थापा २१ वर्ष पछी एक्कासी घरमा आउँदा घरपरिवार र गाउँ चकित परेको छ । भारत गएको ४ बर्ष पछि एकपटक मात्र सम्पर्कमा आएर रु ८ हजार पैसा पठाएका थापा त्यसपछि न परिवारको सम्पर्कमा आए न कोहि आफन्तको नै। तिनै गामन बहादुर थापा हिँजो मंगलकार अचानक एउटा झोला पनि नबोकेर पुरानै घरमा छिरे तर उनलार्इ चिन्न सबैलाई धौ भयो ।
उनले २१ बर्ष अगाडि ८ बर्षको उमेरमा छोडेर गएका उनका छोरा कबिराम थापा यतिबेला बडीगाड ७ को डाँडागाउ बजारमा फर्निचर उद्योग सन्चालन गरि बसेका छन।
गामन बहादुर थापाका एक छोरा र एक छोरीलाई उनले आठ बर्ष र बाह्र बर्षको उमेरमा छोडेर परदेश भारत छिरेका उनी अहिले आउदा छोरीको एक छोरा र एक छोरी भैसकेका छ्न।
यस अन्तरालमा छोराले डाडागाउमा फर्निचर ब्यवसाय सन्चालन गर्दै आएका छन् । गामन बहादुर थापा घरमा आएको गाँर्इगुँर्इ चलिसकेको थियो भने घरपरिवारले पत्याउन सकेका थिएनन् ।
यता गमान बहादुर थापाका छोरा कबिराम थापाकी श्रीमतीले पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्माएको सातौ दिन भएको हुदा परिवारमा न्वारनको तयारी चल्दै थियो । थापाका भार्इ बगाल पनि सुत्केरो चोखाउने गहुत खान थापा कै घरमा जम्मा भएका थिए । न्वारानको काम सकेर छोरा कबिराम थापा दाजुभाइहरुसङ्गै बुवा आएको कुरा निर्कौल गर्न थाम्का तर्फ लागे । घरमा जाँदा छिमेकी र आफन्तले बाबु छोराको चिनाजानी गराइदिए पछि बाबु छोराकै आँखाबाट खुसीका आँसु झरिसकेका थिए ।
त्यसो त उनी १४ बर्षको उमेर बाटै भारत जाने आउने गरेका थिए त्यही बिचमा नै उनको बिवाह र दुई सन्तान भैसकेका थिए तर जब उनी २०५४ सालमा भारत पसे तब उनी चार बर्ष पछि एकपटक फोन सम्पर्कमा आए त्यस यता उनी गुमनाम भए घरमा मर्दो ज्युदो केहि थाहा भएन । छोरा कबिरामलाई नागरिकता बनाउन पनि झन्झट ब्यहोर्नुपर्यो।
उनलाइ जसले बाबाको बारेमा सोध्थ्यो उनी नाजबाफ हुन्थे र भन्थे थाहा छैन उनको मनमा गहिरो चोट परेको अनुभूति प्रश्न गर्ने मान्छे ले नै गर्न सक्थे तर थापाको परिवार मा २१ बर्ष पछि खुसी फर्किएको छ ।
तर श्रीमती भने कलकलाउदो उमेरमा छोडेर गएका श्रीमान सङ्ग ठुस्स छिन् । अझै रिस पोखिरहेकी छिन । दुई सन्तानको लालनपालन र एक्लोपनमा जीवन बिताउदा कति कष्ट भयो ? भन्दै बाझ्दै छिन लोग्ने संग । उता गमान बहादुर भने, ‘मलाई माफ देउ मेरी रानी…’ भन्दै श्रीमतीलाई फकाउदै गरेको दृश्यले उपस्थित सबैलाई मनोरन्जन दिईरहेको थियो ।
तपाईं किन यसरी बेपत्ता हुनुभएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले आफुलाइ मनग्ये पैसा कमाइ रिण तिर्न र राम्रो घर बनाउने शोख रहेको हुदा तीन लाख भारु नकमाइ घर जान्न भन्ने अठोट लिएको र अहिले सो रकम भारत स्थित एक बैकमा जम्मा गरिसकेपछी आफू घर फर्केको उनले ईबागलुङलार्इ बताए । उनले भने, सम्पर्कमा आउन खोज्दा कोहि चिनेको मानिस फेला नपरेको र आफ्नो पढाइ लेखाइ पनि नभएकोले अल्मलिनु परेको बताए ।
उनले पहिले १६ बर्ष फर्निचर कम्पनीमा काम गरेको र पछिल्लो समय दिल्ली स्थित जेसिबी कम्पनीमा काम गरेको बताउदै घर आउन उक्त कम्पनीका इन्जिनियरहरुले सहयोग गरेको बताए ।
बुटबल आइसकेपछी भिङगिठेको बस चढ्न टिकट काटेका थापा नास्ता खान जाँदा बसले झोला लगेर आफुलाइ छोडेपछी निकै तनाबमा परेका थिए तर अहिले काउन्टरको सम्पर्क पछि उनको झोला फेला परिसकेको छ।
निज थापाको अहिले सम्म नेपाली नागरिकता छैन र उनले नागरिकता बनाउन सबैलाइ सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरेका छन।
धार्मिक महोत्सव तयारी सम्वन्धी बैठक सम्पन्न, बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड !
ढोरपाटन नगरपालिकालाई अग्नि नियन्त्रण सामाग्री हस्तान्तरण, सहयोग दाताहरुलाई नगर प्रमुखद्वारा स्वागत !